Muddo kadib Soomaaliya oo ku guuleysatay inay Mooska dibadda u dhoofiso – Radio Muqdisho
Muddo kadib Soomaaliya oo ku guuleysatay inay Mooska dibadda u dhoofiso
Dowladda Soomaaliya ayaa muddo kadbib dalka dibadiisa u dhoofineysa Mooska kaas oo dalka qeybo badan oo kamid ah ka baxa.
Arrintan ayaa timid kadib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya heshiis lagashay Dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga si-loogu dhoofiyo dalalkaas Mooska.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha ee Xukuumadda Saciid Xuseen Ciid oo Wareysi gaar ah siiyey Radio Muqdisho ayaa sheegay in tani guul weyn u tahay Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed.
Dhoofinta Mooska ayaa waxaa dunida uu ka joogaa meel aad u sareysa iyadoona lacago badan uga soo xaroodaa dalalka dhoofiya.
“Dunida waxa labeero Mooska ayaa ugu dhaqaalo badan dalalka dhoofiyana waxaa kasoo gala lacago badan arrintaan sidii aan dib ugu bilaabi laheyn waqti badan ayaan galinay waana ku guuleysanay taas ” sidaas waxaa yiri Wasiirka Beeraha ee Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid.
Trump oo saxiixay sharci lagu taageerayo dibad baxyaasha Hong Kong
Hey’adda Cunnadda iyo Beeraha ee Q M oo doomo casri ah ku wareejisay Dowlad Gobaleedka Puntiland “Sawirro”
Hey’adda Cunnadda iyo Beeraha ee Q M oo doomo casri ah ku wareejisay Dowlad Gobaleedka Puntiland "Sawirro"